Ụbọchị My Pet » Gịnị na-eyi On A mbụ Ụbọchị Site Zodiac Ama
Mgbe ị na-aga na mbụ ụbọchị, ihe mbụ ị na-eleghị anya na-eche banyere ka anya dị ka ị na nwetara ọ bụ, "Gịnị ka m ga-eyi?!"Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ, Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mbụ ị na-eche banyere. Ị chọrọ inwe ntụsara na ihe ị na-eyi, ma unu na-achọ ijide n'aka na ị na-adịghị ewe ya iwe onye ị na-aga na si na, na na ha na-ị mara mma. Chọta ha Zodiac banye n'okpuru na-esi na echiche maka ihe i nwere ike na-eyi na-na-anya ha na ị na mgbe nile.
Gị Aries ụbọchị bụ fieriest nke ọkụ ịrịba ama, nke na-eme ha anabata nke ọma agba red. Ndị ọzọ na-egbuke egbuke na ewu ewu na-acha uhie uhie, mma. Ha na-achọ ịhụ gị ahu kwa, otú eyi uwe na accentuates ndị kasị mma akụkụ ahụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere oké ozu, -aga n'ihi na tightest uwe ị nwere. Ha chọrọ ka gị ibu na-ekpo ọkụ.
Ị Taurus ụbọchị bụ a bara uru n'ụwa ịrịba ama, n'ihi ya, ha na-ahọrọ omenala attire. Buru otu ebe nke anụ na-egosi, ma na-edebe ndị ọzọ kpuchie. Makeup kwesịrị eke-na-achọ, na ọla kwesịrị jupụtara mara mma nkume. Nke a na-ịrịba ama agwa ọma na agba na-ahụkarị na ọdịdị, ụwa na agba dị ka muted elu ma ọ bụ aja aja. Ka ị na-abịa gafee dị ka ihe ụwa chi / chi nwaanyị, mma.
Gị Gemini ụbọchị bụ igwuri egwu na fun, otú uwe na ihe mara mma na obere trendy. Dị ka ihe ikuku ịrịba ama, ha na-amasị ịnọgide na ihe bụ ihe na ihe bụ ihe bụghị. Ha nwere ike a na nwa-dị ka mmadụ, n'ihi ya, ha nwere ike anabata nke ọma ihe na-echetara ha ka ha nke ịbụ ụmụaka / afọ iri na ụma, dị ka plaid skirts na Varsity Jaketị. Gbalịa yi na-egbuke egbuke, fun agba na-akpali ha n'obi.
Gị Cancer ụbọchị bụ ihe ịrịba ama nke nkasi obi, otú ị na-adịghị na-eji ejiji na ihe ọ bụla kwa isọ, eyi gwọọkwa kwa elu, ma ọ bụ na-etinye na a tie ọ bụrụ na ị ga na fidgeting na ya. Ọ bụrụ na ị kpamkpam ala ihe ị na-yi, na Aga-abịa gafee ha. Gbalịa izere egbuke egbuke na agba, ma ọ bụ ihe ọ bụla na nke ahụ bụ n'ezie ọhịa na e nwere na ike mmenyenjo ha.
Gị Leo ụbọchị chọrọ eche dị ka ha nwere kacha ekpo ọkụ ugbu ụbọchị n'ime ụlọ, onye onye ọ bụla nwere ha anya na, otú glam ya. Ha chọrọ ka gị anya dị ka ndị mara mma dị ka ị pụrụ. Ị pụrụ ọbụna ịbụ borderline tacky / gaudy. Layer na ọla – ihe bling, mma. Ha na-amasị-acha uhie uhie n'ihi na ọ na-adọta uche, na ọlaedo na-acha odo odo ebe ha na-na na na agba nke eze.
Gị Virgo ụbọchị anaghị elekọta ọtụtụ ihe banyere mmebe uwe ma ọ bụ handbags ma ọ bụ ihe ọ bụla nke na. Ha na-na nnukwu nchegbu bụ na ị na-esi ísì ọma, o doro anya na ada a ịsa tupu, na na-agaghị yi ukwuu hairspray, techaa, ma ọ bụ dị ka a nwa bebi. Hygiene bụ nọmba otu maka ihe ịrịba ama a. Nọgidenụ na-ekike mfe, sleek, na-arapara na-anọpụ iche na agba. Ha na-adị mfe ọnụ, otú egbuke egbuke na agba-eme ka ha na-echegbu onwe.
Gị Libra ụbọchị bụ ihe kasị fashionable nile Zodiac ịrịba ama, otú i nwere agaghịkwa ya a notch. Dọpụtaara ndị mmebe uwe na-etinye ọnụ a jụụ, trendy anya. Nke a na-ịrịba ama na-achị nkà, nke mere na ha na otú fashionable, na ha na-atụ anya ka ị na-ele anya ọnụ na nkecha. Ha na-amasị ọla-aj u, ngwa, na ndị mara mma ọla, ma ọ bụghị kwa ukwuu nke na ọ.
Gị Scorpio ụbọchị bụ ihe ịrịba ama na-achị achị na ọchịchịrị, Ya mere, gaa nke ọchịchịrị na agba. Ọ bụrụ na ị nwere ike sere anya isi na-ụkwụ nwa, gaa maka ya. Ha gị na-amasị kpuchie elu ma na uko uwe na-echetara ha n'agbụ (ihe ịrịba ama a nwere akara mbipụta). Gaa maka a anwụrụ anya, na-echeta na anya window ka mkpụrụ obi na ha chọrọ inyobanye gị ike.
Gị Sagittarius Pita bụ na-emekarị na n'ime ejiji na uwe, ma ha chọrọ ka ị anya ọma. Ha na-amasị egbuke egbuke na agba na n'anya uwe ma ọ bụ ọla nke nwere otu akụkọ na ya. Ọ bụrụ na ị nwetara ya mgbe njem, ma ọ bụ ọ batara nketa gị site na ụfọdụ iju ọnọdụ, atụfu ya na ka ọ na-ịbụ isi iyi nke na-akpali mkparịta ụka. Ha ga ejedebe achọta * ị bụ na-akpali.
Gị nhiwe Capricorn ụbọchị bụ ihe kasị omenala nile Zodiac ịrịba ama, otú arapara omenala mgbanwe. Ladies, dọpụtaara gị LBD; gents, jidere na uwe na tie. Nọrọ n'ebe egbuke egbuke na agba, na-arapara ọchịchịrị na-anọpụ iche, karịsịa aja aja na nwa. Chee echiche banyere otú ị ga-eji ejiji na-aga a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị gala, na na ga-enye gị ezi echiche nke otú ha chọrọ ka ị anya.
Gị Aquarius ụbọchị bụ ihe kasị unconventional nile Zodiac ịrịba ama, otú obi free igwu egwu na gị anya ma na-agbalị ihe dị iche iche. Dai ntutu gị-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ pink, nganga tout na nkuanya ma ọ bụ afọ button Idupu, ma ọ bụ na-eyi gị recycled soda karama ọla. Ha anaghị eche banyere ugbu a na ọnọdụ, naanị ga-eme n'ọdịnihu, n'ihi ya, anaghị aga na ihe bụ na ugbu a.
Gị Pisces ụbọchị bụ kacha ihunanya, ma ọ bụrụ na ị hụrụ ihe ekike na cover nke a romance akwụkwọ ma ọ bụ na a ihunanya film, ọ pụrụ na-arụ ọrụ. Ha na-amasị ruffles, iberibe na eruba na ije, lace, ma ọ bụrụ na i mere ya onwe gị, mma ọbụna. Ha anaghị echetara na-edebe ya nkịtị ezie, na jeans na a mara mma uwe elu nwere ike ịpụta. Ha mmasị agba ndị pastels.